मोटरसाइकल दुर्घटना : घाइतेलाई बचाउन खोज्दा करेन्ट लागेर दुईको मृत्यु, एक घाइते – PathivaraOnline
Home > समाचार > मोटरसाइकल दुर्घटना : घाइतेलाई बचाउन खोज्दा करेन्ट लागेर दुईको मृत्यु, एक घाइते
admin January 19, 2019 समाचार	0
जनकपुरधाम : धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका कुवा-१२ मा करेन्ट लागेर मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु भएको छ। घटना हेरेर एकजना घाइते भएका छन्।
मृत्यु हुनेमा सिरहाको विष्णपुरा गाउँपालिका-४ का करिब ३२ वर्षीय जगरनाथ साह र धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिकाका-३ का २८ वर्षीय प्रमेश्वर मण्डल रहेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका एसपी गोविन्द थपलियाले जानकारी दिए।
घटना हेरेर जनकपुर उपमहानगरपालिका-४ का ४१ वर्षीय सूर्यनारायण शर्मा बेहाेस् भएका हुन्। शर्मा बेहोस् भएको घटनास्थलमा पुगेका सञ्चारकर्मी सन्तोष साहले जानकारी दिए । उनको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
खेततिर जाने धुलाम्य सडकमा चिप्लिएर मोटरसाइकलमा सवार परमेश्वर नजिकैको बिजुलीको पोलमा उछिटिएर पुगेका थिए। घाइते भएका उनलाई ११ हजार भोल्टेजको करेन्ट लागेको थियो।
घाइते भएका उनलाई बचाउन गएका अर्को मोटरसाइलका चालक प्रमेश्वरलाई पनि करेन्ट लागेको हो। उनी त्यही बेहोस भएका थिए। उनीहरु दुवैजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।थानीयले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरु दुवैजना जग्गा खरिदका लागि सूर्यनारायणसँगै त्यहाँ पुगेका थिए।
१७ वर्षमा १७ जना प्रधानमन्त्री फेरिए, त्यैपनी किन पछि पर्यो नेपाल ? यस्तो भन्छन् भारतीय च्यानल – हेर्नैपर्ने भिडियो
सरिता गिरीकाे दुर्दशाः सकियो सरिता च्याप्टर, लिलादेवीकाे भयो इन्ट्री!
३०८ करोडको धरहरा, ६५ करोड सकिंदा यस्तो बन्यो (भिडियोसहित)
अन्ततः झुक्यो नेपालसँग भारत, गण्डकको साँचो नेपाललाई दियो यसरी फिर्ता (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)